4 Akavhurwa Anobva Mapuratifomu eBig Data | Linux Vakapindwa muropa
Big Data ishoko rinoshandiswa kutsanangura kuunganidzwa kwemashoko makuru uye izvo zvinokura zvakanyanya nekufamba kwenguva.
Iyo data yakakura kwazvo uye yakaoma kupfuura chero echinyakare dhatabhesi manejimendi ekushandisa unogona kuzvichengeta kana kuzvibata nemazvo.
Asi isu tinofanirwa kunzwisisa kuti munhu wese data iro rinogona kuchengetwa, kuwanikwa uye kugadziriswa mune yakatarwa fomati inonzi 'yakarongeka' data
Izvozvo inotarisirwa pachikero chikuru, mariri mhinduro dzinofanirwa kuitwa iyo inokwanisa kubata, kuchengeta uye kuongorora huwandu hwedata munguva pfupi
Kana uchitarisa pamanani anobatwa pamwero mukuru, mumwe anogona kunzwisisa zviri nyore kuti nei zita rekuti 'Big Data' rakapihwa uye fungidzira matambudziko ekuchengetedza nekugadzirisa.
Ndokusaka nhasi tichizodzidza nezve mamwe anozivikanwa akavhurwa sosi maturusi ayo anogona kushandiswa kugadzira dhata rekuongorora data.
Apache Hadoop iri yakavhurwa sosi software chikuva iyo inogadzira yakakura kwazvo data seti munzvimbo yakagoverwa nharaunda.
Ichi chishandiso inoenderana nekuchengetedza, simba rekuverenga, uye kunyanya mune yakachipa-isingadhuri Hardware.
Apache Hadoop iri yakagadzirirwa kuyera zviri nyore kubva kune mashoma kusvika kuzviuru zvemaseva.
Iyo inokubatsira iwe kugadzirisa yemuno yakachengetwa dhata mune yakaenzana yakafanana yekugadzirisa dhizaini.
Imwe yemabhenefiti eHadoop ndeyekuti inobata kukundikana padanho re software. Apache Hadoop inopa chimiro cheiyo faira sisitimu, iyo sango manejimendi sisitimu, uye iyo yekugadzirisa dura.
Inosiya sarudzo yemamwe mapurojekiti uye masystem kuti apinde uye vashande pamwe neHadoop Ecosystem uye vagadzirise yavo yega masisitimu anowanikwa mune ino sisitimu.
Elasticsearch iri yakazara-zvinyorwa-zvakavakirwa pakutsvaga uye analytics injini. Iyo hurongwa zvikuru scalable uye akaparadzirwa, yakanyatsogadzirwa kushanda zvinobudirira uye nekukurumidza nemadhigidhi makuru e data, uko imwe yenyaya dzayo huru yekushandisa ndeyekuongorora kwedanda.
Iyo inokwanisa yekumberi uye yakaoma tsvagiridzo uye padyo chaiyo-nguva kugadziriswa kweiyo yepamusoro ongororo uye inoshanda ungwaru.
Elasticsearch yakanyorwa muJava uye yakavakirwa pana Apache Lucene, Elasticsearch yakavakirwa pagwaro reJSON rine schema-isina chimiro, zvichiita kuti zvive nyore uye nyore kutora.
Iyo ndeimwe yemabhizimusi anotungamira ekutsvaga enjini. Iwe unogona kunyora yako mutengi mune chero chirongwa chemutauro; Elasticsearch inoshanda zviri pamutemo neJava, .NET, PHP, Python, Perl, nezvimwe.
MongoDB iri dhairekitori reNoSQL rakavakirwa parugwaro dhata modhi. MuMongoDB zvese zviri muunganidzwa kana gwaro.
Kuti unzwisise MongoDB terminology, kuunganidza iri rimwe izwi rekuti tafura, nepo gwaro riri rimwe izwi rinoshandisirwa mitsara.
MongoDB ndeye yakavhurwa sosi, gwaro-rinotungamirwa, muchinjika-chikuva dhatabhesi. Izvo zvakanyorwa kunyanya muC ++.
Iyo zvakare inotungamira NoSQL dhatabhesi inopa kuita kwakanyanya, kuwanikwa kwakanyanya, uye nyore scalability.
MongoDB inoshandisa zvinyorwa zvakaita seJSON zvine schema uye inopa rutsigiro rwemubvunzo. Mamwe emabasa aro makuru anosanganisira kunongedza, kudzokorora, kuenzanisa mutoro, kuwanda, uye kuchengetedza faira.
Cassandra ari yakavhurwa sosi Apache chirongwa chakagadzirirwa NoSQL dhatabhesi manejimendi.
Mitsara yaCassandra yakarongeka mumatafura uye yakanongedzwa nekiyi. Iyo inoshandisa yekuwedzera-chete, rekodhi-yakavakirwa yekuchengetedza injini.
Dhata muCassandra inoparadzirwa pamatanho mazhinji ematenzi, Pasina kana poindi imwechete yekutadza. Icho chirongwa chepamusoro cheApache, uye kuvandudzwa kwayo parizvino kunotarisirwa neApache Software Foundation (ASF).
Cassandra ari yakagadzirirwa kugadzirisa matambudziko ane chekuita nekushanda pamwero mukuru (webhu).
Yakapihwa tenzi waCassandra tenzi, inogona kuramba ichishanda kunyangwe iine diki (asi yakakosha) nhamba yekutadza kwehardware. Cassandra inomhanya pane akawanda maodhi munzvimbo dzakawanda dhata nzvimbo.
Dzokorora dhata mune idzi dhata nzvimbo kuti udzivise kukundikana kana nguva yekuzorora. Izvi zvinoita kuti ive nemhosva kwazvo inoshivirira system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » 4 yakavhurika sosi mapuratifomu eBig data
Mutsvene Isid akadaro
Ndiri kufarira kudzidza nezveBigData, parizvino ndine account yakachengetwa muibm gore, ndinoda kushanda ipapo naApache Spark asi handina kukwanisa kubatana zvakanaka nechikwata changu, ndingafarire rutsigiro rwenyu
Pindura Sant Isid